खरबुजाको भाउ १० रुपैयाँ केजी, त्यतिमा पनि किन्न मान्दैनन विक्रेता, मारमा किसान - ramechhapkhabar.com
खरबुजाको भाउ १० रुपैयाँ केजी, त्यतिमा पनि किन्न मान्दैनन विक्रेता, मारमा किसान
२१ वैशाख, झापा।
शिवसताक्षी–५ का धनकुमार ताजपुरियाले माई नदी बगरको चार विघामा खरबुजा खेती गरेका छन्। उनले वैशाख पहिलो साताबाट खरबुजा बिक्री सुरु गरे । हिउँदभर दुःख गरेर लगाएको खरबुजा राम्रो फलेपछि खुसी थिए, उनी।
तर, चैत अन्तिम साता आएको असिनाले उनको खरबुजामा क्षति पुर्‍यायो। ‘असिनाले त बर्बाद नै गर्‍यो नि ! निकाल्ने बेला भएको सबै खरबुजा फुटायो । पहिलो लटको त काम नै लागेन,’ उनले भने।
उनले खेतीका लागि बगरमा मलजल गरे । बगरमा ‘पैसा’ फलाउन सकिन्छ कि भन्‍ने आसले दुःख गरे । यहाँ आफ्नो पसिना मात्र खर्च गरेका छैनन् । ताजुरियाले सात लाख रुपैयाँ लागत पनि लगाएका छन् । अहिले बजारमा खरबुजाको भाउ एक्कासी घट्दा चिन्तामा छन्, उनी । ‘गत वर्ष यो बेलामा ४०–५० रुपैयाँ केजीमा खरबुजा बिक्री हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त १० रुपैयाँ केजीले बेच्नुपरेको छ ! यसपटक त नाफा त परको कुरा लगानी पनि नउठ्ने खतरा छ !’
शिवसताक्षी–४ का सन्तोषकुमार ताजपुरियाले पनि माई खोलाको बगरमा खरबुजा लगाएका छन् । स्वदेशमै केही गर्ने उद्देश्यले उनले माई खोलाको बगरमा खरबुजा खेती लगाएका हुन् । ‘स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ । विदेश जान हुँदैन भन्‍ने लागेर खरबुजा खेतीमा लागेको हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘कहिले लकडाउनले समस्या पार्छ । कहिले असिनाले समस्या पर्छ ।’
उनी आफैँ स्थानीय बजारमा खरबुजा बिक्री गर्न लैजान्छन् । गौरादह, गौरीगञ्ज, शिवगञ्जलगायतका बजारसम्म बेच्न लैजान्छन्। आफैँ बेच्न लजाँदा पनि प्रति केजी १० रुपैयाँ मात्र आउने गरेको उनी बताउँछन् । ‘आफैँ बेच्न ल्याउँदा पनि १० रुपैयाँ केजी बेच्नुपरेको छ । एकदम समस्या भएको छ । लगानी पनि नउठ्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ,’ उनी भन्छन्, ‘ऋण गरेर ल्याएको पैसा डुब्यो भने त समस्या हुन्छ।’ सिजनको सुरुवातमा ३० रुपैयाँ केजीसम्म खरबुजा बिक्री भएको उनी बताउँछन्।
तर, सुरुमा असिनाका कारण खरबुजा फुटेर बिक्री गर्नै नपाएको उनको भनाइ छ । ‘सूरुमा ३०–३५ रुपैयाँ केजी थियो । अहिले १० रुपैयाँ छ । तर, मूल्य धेरै भएको बेलामा खरबुजा निकाल्नै पाइएन सबै खरबुजा असिनाले फुटायो,’ उनी भन्छन्, ‘यो दोस्रो लटले कतै लगानी त उठाउला कि भनेको भाउ छैन । बजारमा एकैपटक खरबुजा निस्किए । त्यसकारण पनि मूल्य एकैपटक घट्यो। ६ लाख भन्दा धेरै लगानी छ । साथीहरू मिलेर खेती गरेका हौँ । यसपटक लगानी उठ्नै गाह्रो हुने भयो । यसपटक हाम्रो मात्र हैन धेरैको क्षति भयो । हाम्रो त रुवाबासी नै भएको छ।’
बर्सेनि कुनै न कुनै रूपमा किसानले समस्या भोगेकै छैन । कहिले बाढीपहिरो त कहिले कोरोना महामारी । तर, स्थानीय सरकारले किसानलाई केही सहयोग नगरेको ताजपुरिया बताउँछन् । ‘यस्तो गाह्रो पर्दा पनि स्थानीय सरकारले कहिल्यै सहयोग गरेन ।नगरपालिकामा बझ्दा केही सहयोग छैन भने । स्वदेशमै केही गर्छु भनेर लाग्नु त धेरै गाह्रो पो रहेछ,’ उनले भने । झापाको माई, बिरिङ र मेची नदीको बगरमा स्थानीयले खरबुजा खेती गर्दै आएका छन्।
बजारमा किन्न जाँदा भने खरबुजाको भाउ ६० रुपैयाँ केजीभन्दा माथि छ।